Mid ka mid ah Wasiirada cusub ee maamulka Koonfur Galbeed oo ka cudur daartay jagadii loo magacaabay – Balcad.com Teyteyleey
Mid ka mid ah Golaha Wasiirada cusub ee uu dhowaan ku dhawaaqay Madaxweynaha maamul goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa ka cudur daartay inuu qabto xilka loo magacaabay.
Wasiirka Howlaha Guud iyo dib u dhiska Dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Eng. Saalax Sheekh Cusmaan ayaa shaaca ka qaaday in jagadaasi loo magacaabay xilli uu dalka ka maqnaa.
Eng. Saalax oo isagu horay u soo noqday Wasiirka Howlaha guud iyo dib u dhiska Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa bartiisa xiriirka bulshada waxa uu ku sheegay in markii uu qiimeeyay marxaladda maanta uu dalku marayo ay u soo baxday inuusan marnaba qaban karin xilkaas.
“Way mahadsan tahay cidii anigoo maqan xilkaas igu sharftay, marka aan qiimeeyay marxalada la joogo waxaa ii soo baxday inaan qaban xilka laygu magacaabay ee ah Wasiirka Wasaaradda Hawlaha Guud iyo Dib u Dhiska Dawlad Goboleedka K/Galbeed sabbabo jira awgood” ayuu yiri Eng. Saalax Sheekh Cusmaan.
Dhinaca kale mas’uulkaan ayaa isagu sheegay inuu howlo Qaran u joogo dalka dibadiisa, isagoona sheegay inuu jecel yahay qaranimada, wadajirka iyo bulshada Soomaaliyeed, isla markaana uu haatan ku guda jiro dadaal waxtar leh oo Soomaaliya lagu horumarinayo.
Cudur-daarka Wasiirka Howlaha guud iyo dib u dhiska dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ayaa ku soo beegmaya xilli dhaliilo fara badan loo jeedinayo magacaabista Golaha Wasiirada cusub ee Madaxweyne Shariif Xasan laguna eedeynayo inuu hareer maray dastuurka maamul goboleedka iyo saami qeybsiga beelaha goboladaasi wada degan.
The post Mid ka mid ah Wasiirada cusub ee maamulka Koonfur Galbeed oo ka cudur daartay jagadii loo magacaabay appeared first on Ilwareed Online.
Cawaale Aadan: “Waxay ii noqoneysaa heestii iigu horeysay ee aan ku duubo kuna soo saaro Xamar…”